Fanakalozam-bola any Bali " Journey-Assist
Pejy fandraisana » Eran-tany / Faritra » Asia » Indonezia » Bali » Fifanakalozana fifanakalozana amin'ny Bali
Satria i Bali dia ao amin'i Indonezia, ny vola nasionaly dia ny Rupee Indoneziana. Izy io dia tarehin'ilay fanafohezana latinina IDR, ary amin'ny mari-pahaizana amin'ny fivarotana any Bali dia matetika no taratry ny litera Rp. Amin'ny kabary fitenenana dia miantso ny vola hoe "perak" matetika ny mponina - izany hoe "volafotsy".
Vola any aoriana
Inona ny vola hitondrana any Bali
Fandoavana vola amin'ny vola
Mpivarotra any Bali
Banky banky any Bali
Aiza no hanovana vola any Bali
Mpanova Vola Fampianarana amin'ny Internet
ATM ao Bali
Vavaky ny Bali
Hatramin'izao dia misy mivezivezy any Bali sy manerana an'i Indonezia ny fanaram-batana 1, 000, 2, 000, 5, 000 ary 10 rupees Indoneziana. Amin'ny fomba ofisialy, ny 000 Rupee dia mitovy amin'ny senatera 20, saingy tsy mbola navoaka ilay akama ary efa ela no nateraka noho ny fisondrotam-bidim-piainana. Na izany aza, ny vola madinika any Bali dia hita ao am-piasana ary manana rihana 000, 50, 000 ary 100 000 rupees.
Indraindray ianao dia mahita vola madinika misy lavaka eo afovoany. Vola avy amin'ny sinoa io, taloha taloha amin'ny fividianana kely, nefa natao ho an'ny fombafomba ara-pivavahana ihany ho fanomezana andriamanitra sy fanahy.
Fandaminana sy fifanakalozana fifanakalozana any Bali
Any amin'ny toerana fizahan-tany dia azo atao ny mandoa vola amin'ny vola Indoneziana sy dolara amerikana, fa ny tahan'ny tranga farany kosa dia tena tsy hahasoa. Ny safidy tsara indrindra dia ny mitondra dolara miaraka aminao, ary avy eo atakalo vola ho anao any Bali.
Fanakalozam-bola (converter). Ny taranja rosiana Indoneziana.
Eto ambany no ahitanao ny mpanova vola (calculator). Efa foana izany ny fifanakalozana fifanakalozana ofisialy ankehitriny ny Rupee Indonezianina.
Indraindray ny fihenan'ny dolara amin'ny fifanakalozana fifanakalozana eo an-toerana indraindray dia miova ao anatin'ny iray andro, na dia tsy dia ilaina loatra aza ny fihenan-danja. Tsy misy olana mihitsy raha toa ka manana vidiny eo amin'ny 50 sy 100 dolara ny volavolan-bolanao, vaovao sy madio izy ireo ary navoaka tsy tamin'ny voalohan'ny 2004. Saingy ny banknotes ireo taona vitsivitsy nivoahana tamina fifanakalozana lehibe teo amin'ireo mpivarotra dia mihena, amin'ny tahan'ny ratsy indrindra, ary amin'ny lafiny sasany dia tsy eken'izy ireo mihitsy.
I Euros ihany koa no manakalo amin'ny lafiny rehetra, fa ny tahan'ny fifanakalozana dia somary tsy dia mahomby amin'ny fifanakalozana fifanakalozana dolara. Hisy ny olana amin'ny rubles Rosiana ary toy izany koa ny volavolan-dalàna Okrainiana hryvnias sy belarosiana rubles, noho izany dia atosika mafy ianao fa hitondra dolara fotsiny ianao (na amin'ny tranga sarotra).
Ho an'ny efitrano fandraisam-bahiny iray saika trano fandraisam-bahiny any Bali dia azo atao ny mandoa amin'ny alàlan'ny carte de crédit na vola, ka tsy tokony hovana avy hatrany ny vola be. Rehefa kajy ny hotely iray misy karatra dia esorina ny vaomiera iray ao amin'ny banky, izay eo ho eo amin'ny 3-5 isan-jaton'ny vola.
Ny vola dolara dia natolotry tsara ho atakalo ho an'ny rupee eo an-toerana, satria rehefa manao kajy dolara dia mihena ny vidin'ny vidiny tsy mahomby. Ny fifanakalozana dia azo atao amin'ny mpivarotra ofisialy na havanana eny an-dàlana izay misy mpanakalo vola, fa amin'ity tranga farany ity dia misy risika amin'ny fanaovana hosoka. Matetika indrindra dia misy fitaka rehefa mifanakalo amin'ny araben'i Legian sy Kuta.
Inona ny vola raisina ao Bali
Alohan'ny hahatongavanao any Bali, ny fananana vola miaraka aminao hanakalo azy ireo any amin'ny nosy dia tokony ho fantatrao ny fihenan'ny sasany. Ny voalohany dia na dia tsara vintana aza ianao amin'ny mahita mpivarotra ekena izay ekena ny vola Rosiana, dia azo antoka fa misy ny kannibaliste. Noho izany, afaka mitondra dolara na euro fotsiny ianao.
Tena tsy mifanaraka amin'ny fifanakalozana sy ny mpampivarotra vola eny an-dalambe. Afaka manolotra lenta mahasoa kokoa izy ireo, saingy saika hanandrana mikoroka foana. Raha mbola manapa-kevitra io safidy io amin'ny loza sy loza mety hitranga ianao, dia mila manamarina ny volanao avy hatrany aorian'ny fifanakalozana.
Nuansa iray hafa - any amin'ny birao fifanakalozana maro, ny volan'ny antokom-pivavahana samihafa dia takalo amin'ny sandany samihafa. Manokana, amin'ny ampahany lehibe amin'ny fifanakalozana amin'ny banky 1 miaraka amin'ny sandan'ny $ 100 dolara dia homena vola Indoneziana kely kokoa noho ny 10 volafotsy amin'ny sandry 10 dolara.
Ao amin'ny biraon'ny fifanakalozana ofisialy ihany no tokony hanaovana ny fifanakalozana. Ahoana no hanavahana ny exchanger ofisialy amin'ny iray tsy ofisialy? Voalohany, ny hevitra ofisialy dia hita ao amin'ny efitrano misaraka foana. Faharoa, ny exchanger ofisialy dia takiana mba hameno endrika, manondro ao ny anaranao feno, ny vola hatakalo ary ny karazana vola. Fahatelo, ny teboka ofisialy dia misy marika mena sy manga miaraka amin'ny soratra hoe "Fanakalozam-bola nahazo alàlana". Fa ao amin'ireo mpanakalo, izay tsy misy soratra hoe "tsy misy comission", rehefa mifanakalo dia maka komisiona mahamarika ary manatanteraka ny fifanakalozana amin'ny taha tena tsy mahasoa. Ankoatr'izay, raha any amin'ny biraon'ny fifanakalozana sasany dia mahaliana kokoa ny taham-bidy noho ny any amin'ireo birao akaiky hafa, dia tokony hanantena hahazo trondro ihany koa ianao.
Avy amin'ny traikefa manokana, tsara amin'ny banky Bali ny làlana. Ao amin'ny faritra mpizahatany, maro ny banky tsy manova vola, fa raha mikasa ny hipetraka amin'ny toerana iray ianao amin'ny toerana iray, dia manoro hevitra izahay fa hahita sampana banky eo akaikin'ny toerana misy ny fanovana ny vola.
Karatra plastika any bali. ATM
Raha mikasa ny ho tonga any Bali ianao miaraka amin'ny karatra banky, dia tokony ho fantatrao koa ny nuansa sasany. Betsaka ny ATM amin'ny toerana fizahan-tany eto amin'ity nosy ity. Na inona na inona anananao manana karatra dolara, ny rosiana indonezianina ihany no avoakan'ny ATM eto. Ny ATM sasany dia tsy misy afa-tsy vola 100 000 rupees fotsiny, ny hafa - 50 000. Soso-kevitra ny haka karatra mifandray amin'ny kaonty amin'ny vola azo ovaina malalaka (Dolara amerikana na euro). Araka izany, azo atao ny manafoana ny kaomisiona amin'ny famoahana vola, izay farafahakeliny 3 isan-jato.
Ny vola azo alaina amin'ny karatra amin'ny ATM iray isaky ny mandeha dia 3 Rupee ny taha indrindra (000 $ eo ho eo). Na izany aza, matetika kokoa dia ambany kokoa aza. Ambonin'izany, saika isaky ny ATM dia voasoratra hoe karazam-pinoana inona no azonao atao ao. Ary ny habetsaky ny be indrindra dia miankina amin'io antokom-pivavahana io. Ka raha 000 200 avy ny faktiora dia afaka mandroaka hatramin'ny 50 ny ATM na hatramin'ny 000 1 000. Ao Legian, iray monja ny ATM afaka mandefa 000 - izany dia ATM an'ny Permata Bank.
Zava-dehibe ny mahafantatra!
Indonezia, banky eran'izao tontolo izao, dia heverina ho firenena manana risika mitombo amin'ny resaka vola. Noho izany, aza adino ny mampitandrina ny bankinao fa mikasa ny hampiasa ny banky banko ao Indonezia ianao. Raha tsy izany, aorian'ny fampiasana voalohany karatra plastika dia mety ho voasakana!
Torohevitra fifanakalozana fifanakalozana amin'ny Bali
Ny safidy azo itokisana indrindra amin'ny fifanakalozana dia banky. Taorian'io dia tonga ny birao fifanakalozana fifanakalozana ofisialy. Nahazo laza ratsy ireo teboka fifanakalozana tsy ofisialy ary mpivarotra vola an-dalambe.
Ny banky any Bali dia tsy manandrana mamitaka na iza na iza mihitsy, ary omena azy ireo ny vola, izay tsy maintsy tazonina mandra-piveriny avy any Indonezia. Amin'ity tranga ity dia tsy misy komisiona voampanga na ny habeny dia aseho eo akaikin'ny tahan'ny fifanakalozana. Matetika izy io dia karazana vola kely voafetra (salanisa - 200 ropia), tsy miankina amin'ny vola natakalo. Ora fiasana amin'ny banky - hatramin'ny 8 ka hatramin'ny 15.
Tsy misy olana ihany koa amin'ireo mpivarotra ofisialy ofisialy, fa amin'ny mpiondana vola tsy ofisialy dia afaka misoloky mora foana izy ireo. Manokana izy ireo dia afaka mandray komisiona mpiremby any - hatramin'ny 30 isan-jaton'ny sandan'ny fifanakalozana, na manandrana manararaotra fa ny volavolan-dalàna Indoneziana dia tsy dia misy fahasamihafana firy (indrindra fa ny antokom-pinoana 10 000 sy 100 000 rupees) ary tsy dia mahazatra loatra an'ireo mpizahatany tsy za-draharaha ...
Ao amin'ny fivarotana maro sy ny fikarakarana karatra fiomanana no azo atao. Matetika ireo andrim-barotra lehibe dia tsy mandoa vaomiera, raha ny kely kosa matetika mandoa 3 isan-jaton'ny vola vidiana rehetra. Ary alohan'ny dia mandehandeha dia mila manadihady amin'ny bankinao momba ny vaomiera momba ny fifanakalozana any amin'ny firenena vahiny ianao.
Raha manapa-kevitra ny hanakalo vola amin'ny arabe ianao ary handresy lahatra ilay mpampivarotra vola, nefa tsy te hamerina ny volanao izy, dia mitombina ny mandrahona ny hiantsoana ny polisy mpizahatany (Telefaonina mahasoa any Bali)
Amin'ny tranga sasany dia manampy izany, nefa matetika dia mila fampisehoana lava sy mandreraka be. Tokony hiova ho vola kely ny vola, azo antoka kokoa.
Mahatoky, miaina amin'ny Ubud izy ireo, nanova ny vola tany amin'ny sampana banky izy ireo. Tsara ny làlana ary azo antoka fa tsy miangatra ny rehetra. Eny. Tsy ny fanovana banky rehetra no miova. hafahafa toy izany amin'ny bankiny. Mampalahelo fa tsy tadidiko ny anaran'ilay banky.
Io banky io ihany, amin'ny lafiny iray, akaikin'ny fidirana, dia ireo mpiasan'ny banky. Navoaka tao anaty karatra imbetsaka izy ireo. Tena mety izany. efitrano azo hidirany misaraka. Fakantsary fiarovana. ATM voalamina. Vola vitsivitsy ihany no andoavany fa afaka manova dolara zato foana ianao.
Ary tamin'ny lalana, na dia nampitandremana aza ny bankiko fa hampiasa ny karatra any Indonezia aho, dia mbola nosakanin'izy ireo ihany ny karatra taorian'ny fanalana azy ireo toy izany. Nahazo tombony haingana sy voaraikitra haingana ny tombony. Ary rehefa tafaverina avy any Bali, herinandro taty aoriana, nanova ny fahaleovantena amin'ny alàlan'ny karatra ny banky, ary miady hevitra amin'ny alàlan'ny SMS fa tany Indonesia ianao, ary ho fiarovana ny volanao, dia manova ny PIN-nao ianao.
Toa ny tahan'ny tsara indrindra, ary amin'ny ankapobeny dia nisy fifanakalozana fifanakalozana amin'ny banky BRI. Tao Ubud no nisy azy io